Ny vanim-potoan'ny adolescent
Nandritra ny fotoana lava dia nisy tendrombohitra maro tsy misy fiara , ny nify voalohany sy ny dingana voalohany. Nihalehibe ilay zaza ary niditra tao amin'ny vanim-potoan'ny adolescent. Inona no dikan'izany ho an'ny ray aman-dreny ary raha misy manakorontana, tsy dia mahomby firy ny famantaranandro biolojika iray - dia ho hitantsika izao.
Amin'ny firy no manomboka ny vanim-potoan'ny adolesan?
Talohan'io, ny vanim-potoan'ny tetezamita dia nantsoina hoe "adolescence" ary naharitra 12 ka hatramin'ny 17 taona. Ao amin'ny firenentsika, ireo fitsipika ireo dia voatahiry hatramin'izao. Hatramin'ny 12 ka hatramin'ny 14 taona, io dia ny fahazazana vao haingana, ary ny 15 hatramin'ny 17 taona dia tara.
Noho izany, ny vanim-potoanan'ny adim-pahaizana dia mandrakotra ny vanim-potoan'ny fiainana mandritra ny 12 ka hatramin'ny 17 taona. Any amin'ny firenena hafa, io faram-pamokarana io dia miovaova arakaraka ny toerana, ny finoan'ny olom-pirenena sy ny fomban-drazana. Ohatra, any amin'ireo firenena any atsimo, manomboka amin'ny folo taona izy io, fa amin'ny hafa kosa dia mifarana amin'ny 19 taona monja.
Fotoana zatovo amin'ny ankizilahy
Amin'ny ankizilahy, ny taonan'ny fifindrana, na dia mifanohitra amin'ny ofisialy ilay tovovavy aza, fa amin'ny fiainana tena izy dia manomboka aty aoriana. Raha eo amin'ny 13 ka hatramin'ny 15 taona dia manomboka manova ny feon'ilay feo ny solontenan'ny antsasaky ny zanak'olombelona, ​​hita ny boribory voalohany.
Mihamitombo tsikelikely amin'ny tongotra ny tongolobe, eo ambanin'ny sandry sy ao anaty kirany, mihamalalaka kokoa ny tratra ary indraindray mandritra ny torimaso dia mihetsika ny ejaculation, izay mahazatra.
Ny fampandrosoana ny zaza mandritra ny fahazazana dia tsy miasa ara-batana fotsiny, fa ara-psikolojika ihany koa. Amin'izao fotoana izao dia misy fifandonana miaraka amin'ireo ray aman-dreny izay tsy mahatakatra ny zandriny indrindra . Ny olon-dehibe dia tokony hiezaka ny hahita ny fifandraisana amin'ny ankizy - fialam-boly, fialam-boly, ho tonga mpampianatra azy fa tsy olon-kafa.
Tanora eo amin'ny zatovovavy
Ho an'ireo singa manokana amin'ny vanim-potoanan'ny adolescent, ny tovovavy dia mety hahitana tombony amin'ny fahazoana tombony noho ny fibra fonosana, izay mahatonga ny endrika sy ny vehivavy. Mitranga eo amin'ny 14-16 taona eo ho eo izany, efa aorian'ny fanombohan'ny fotoana (12-13 taona), na dia ny 20-22 taona ihany aza no hamolavola ny vehivavy ho avy.
Ny loza sy ny loza ateraky ny vanim-potoanan'ny adim-pahaizana dia ahitana faniriana mafy ny hanamafy ny tenany, matetika amin'ny fomba tsy azo ekena. Eo ambany fitarihan'ny namana amin'izao fotoana izao dia manomboka mifoka sigara ny tovovavy, manandrana misotro toaka ary manao firaisana.
Mba hisorohana ny olana toy izany dia ilaina, alohan'ny hanombohan'ny adolescence, mba hampisy fifandraisana azo antoka amin'ny zanaka vavy. Tsy ilaina ny manohitra amin'ny fanehoana ny maha-izy azy ny maha-izy azy, izay aseho amin'ny faniriana hanao tatoazy, mamakivaky na mandany fotoana miaraka amin'ny namana ary avy eo tsy misy fahatsapana rafitra, tsy hikatsaka am-pahavitrihana ny zandriny ny zatovo.
Boky ho an'ny zatovo 12-14 taona
Fandefasana sarimihetsika fanta-daza ho an'ny ankizy
Ahoana ny fomba ampianarana ny ankizy iray hisaina ao an-tsaina - kilasy 1, metodolojia
Ahoana ny hiarahabana ny reny amin'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahany?
Gopnik - ny subculture
Toro-tady eo amin'ny hoditry ny tanora
Lalao ho an'ny tanora 14 taona
Firy isam-bolana isa-minitra tokony vakiana voalohany?
Akanjo ho an'ny zatovolahy - fararano
Miparitaka amin'ny rivotra - fitsaboana
Ny boky tsara indrindra amin'ny raharahambarotra
Fitsaboana ny hatsiaka iraisana amin'ny fanafodin'ny volokano
Ny akanjo lava kapa-ririnina 2015-2016
Ahoana no hiderana ny zanany?
Inona no tokony hatao amin'ny kapa mena?
Tranolay vita amin'ny oak
Mampiasà karazan-tsakafo ho an'ny zazakely amin'ny alàlan-kibo
Fiompiana ho an'ny akquarium amin'ny tanany manokana
Valam-pirenena ao Grenada
Harena haemostatika miaraka amin'ny ra mandriaka - ny fomba tsara indrindra
Antrasy ao amin'ny akoholahy - famoahana
Nahoana no orana ny orkide?